Fambolem-bary : TONGA NY MASOMBOLY AVY ANY BRESIL -
AccueilVaovao SamihafaFambolem-bary : TONGA NY MASOMBOLY AVY ANY BRESIL
30/01/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nanjakan’ny haintany ny afovoan-tany sy ny faritra avaratra tao anatin’ny vanim-potoana tokony efa nanjakan’ny orana, nikorontana avokoa ny seha-pamokarana ka nanimba ny vary aloha. Natahorana ny tsy hisian’ny vary noho ny haintany be loatra, potika avokoa ny vokatra ka hilana paikady maharitra hiatrehana ny fiovaovan’ny toetry ny andro. Nampitomboina 80% ny fanafarana vary noho ny tsy fahampian’ny famokarana vary eto amin’ny sehatra nasionaly amin’ity taona 2017 ity. Ankoatra ireo dia manana vina ho an’ny fitsinjovana ny famokarana maharitra ny FO.FI.FA na ny Foibe Fikarohana ho an’ny Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, amin’ny alalan’ny fanapariahana karazam-bary mifanaraka amin’ny fiovaovan’ny toetry ny andro. Anisan’ny voakasiky ny tetikasa ohatra ny ao Ambatondrazaka izay misedra olana ihany koa vokatry ny fisian’ny haintany tao anatin’ny roa volana izao. Tsy ny ao Ambatondrazaka ihany anefa no hisitraka izany raha ny fanazavan’ny tale siantifikan’ ny Fo.Fi.Fa , Rakotoarison Jacqueline fa ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara.
Tsy aharaka ny voka-bary raha toa ka ny Makaolika ihany no hambolena, raha amin’izao vanim-potoana izao isika no mamboly ny Makaolika dia ho tratry ny hatsiaka indray izany ka ho fatiantoka no ho jinjaina. Misy ny karazam-bary avy any Bresil toa ny Sebota 406 sy ny 410 ary ny Fofifa 174 Madikatra izay mifanaraka amin’ny fiovaovan’ny toetry ny andro izay ka hanatsarana ny seha-pamokarana. Ho tratry ny hatsiaka ny fotoana tokony hamelahan’ireo voka-bary ka hilana fepetra dieny izao. Misy ny karatra ahitana ireo karazam-bary mifandraika amin’ny toetry ny andro misy isam-paritra. Ireo masomboly ireo no hampiasainy hivoizana ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetry andro. Manakely ny fahaverezan’ny rano ny teknika hampiasaina ary mampitombo ny rano ao anatin’ny tany, mitahiry ka mifehy ny fahaverezana. Betsaka kokoa ny rano ny rano midina ao anatin’ny tany ahafahana mamokatra hamandoana, mifanaraka amin’ny fambolena atao.